Tag: ERP | Martech Zone
Nei Kutengesa uye Kushambadzira Matimu Anoda Cloud ERP
Chipiri, Gunyana 6, 2020 Muvhuro, October 5, 2020 Ajoy Krishnamoorthy
Kushambadzira uye vatungamiriri vekutengesa zvinhu zvakakosha mukutyaira kambani mari. Dhipatimendi rekushambadzira rinoita basa rakakosha mukusimudzira bhizinesi, kudoma zvarinopa, uye nekumisikidza vanosiyanisa. Kushambadzira zvakare kunogadzira kufarira chigadzirwa uye kunogadzira zvinotungamira kana tarisiro. Mune konzati, zvikwata zvekutengesa zvinotarisa pakushandura tarisiro yekubhadhara vatengi. Mabasa acho akanyatsobatana uye akakosha pakubudirira kwe bhizinesi. Tichifunga nezvekukanganisa kwekutengesa uye kushambadzira kune iyo pa
2014 Kushambadzira Mateki kubva kuSalesforce Kushambadzira Cloud
Chipiri, Zvita 23, 2014 Muvhuro, Zvita 29, 2014 Douglas Karr
Zvichida chimwe chezvinhu zvikuru kwazvo zvinouya kubva mugore ra2014 ndezvekuti makambani ari kutanga kutarisa zvakawanda padyo nerwendo rwevatengi. Zvigadzirwa zvako zviri kuwanikwa sei online? Iwe uri kuendesa sei iyo tarisiro kubva mukutsvaga kuburikidza nekutendeuka? Uye zvakatonyanya kukosha, uri kuitei kuti uve nechokwadi chekuti unochengeta nekuvaka hukama hwakakosha nevatengi vako? Salesforce Kushambadzira Cloud yakaona kuti makumi masere neshanu muzana evatengesi vepamusoro-soro vanobvumirana kuti kuve ne
Peji Yekumhanya uye Vako Vashanyi
Mugovera, Nyamavhuvhu 6, 2011 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Chimwe chezvinhu chakanyanya kuomarara kana kudhura kukonzeresa ndiko kumhanya kunotakuriswa saiti yako. Iyi ihondo inogara iripo pano paMartech… kusangana kwemagariro uye kushambadzira kunononoka peji kutakura nguva nzira, zasi saka saka isu tinogara tichiedza kuzvigadzira kuburikidza nenzira dzinoverengeka. Isu tinoziva kuti tinorasikirwa nevamwe vashanyi pamusoro payo - kunyanya kana paine yakawanda traffic. Mamwe makambani haatore nguva yekuremerwa